रामेछापमा कहिले हुँदैछ निर्वाचन ? « Ramechhap News
रामेछापमा कहिले हुँदैछ निर्वाचन ?
१५ भदौ, काठमाडौं ।
सरकारको सिफारिस अनुसार निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन दुई चरणमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले विहिवार आगामी १० मंसिरमा पहिलो चरणमा हिमाली र उच्च पहाडी ३२ जिल्ला तथा २१ मंसिरमा पहाडी र तराईका ४५ जिल्लामा दुवै निर्वाचन एकसाथ सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको हो ।
रामेछाप जिल्लाको एक प्रतिनिधिसभा र २ प्रदेशसभामा भने पहिलो चरण अर्थात मंसिर १० गते नै निर्वाचन हुने भएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आगामी मंसिर १० र २१ दुई चरणमा दुवै तहका निर्वाचन गर्ने निर्णय लिएको थियो ।
यस्तै, प्रदेश ३ का सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, काभ्रे, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर, प्रदेश ४ का नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व० तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा र पर्वतमा सोही चरणमा चुनाव हुनेछ ।
यसैगरी, प्रदेश ५ का नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, प्यूठान बाँके र बर्दिया, प्रदेश ६ का सल्यान, सुर्खेत र दैलेख तथा प्रदेश ७ का कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, अछाम र डोटीका मतदाताले दोस्रो चरणमा मत दिन पाउने छन् ।